Ahoana ny fomba hanafenana sary sy horonan-tsary nakana anarana anao amin'ny Instagram | Androidsis
Ahoana ny fomba hanafenana ny sary sy horonan-tsary amin'ny piraofilinao ao amin'ny Instagram izay hametrahan'izy ireo marika anao
Rehefa misy mampakatra sary amin'ny Instagram, azonao atao ny manisy marika ny sary toy izany. Ka ny namanao iray dia afaka manondro anao amin'ny sary na horonantsary amin'ny tambajotra sosialy. Ireo sary na horonan-tsary misy ireo olona manisy marika anay, dia aseho koa ao amin'ny mombamomba anay ao amin'ilay fampiharana, ao amin'ilay faritra misy marika. Na dia mety te hanafina ireo sarin'ny profil ireo aza isika, cAhoana no hanafenanay tantara ho an'ny mpampiasa sasany.
Instagram dia manolotra ny mpampiasa ny fahafaha-manao tantano ny sary nasiana marika. Zava-dehibe izany, mba hahafahan'ny mpampiasa tsirairay mifehy azy io ary afaka manao izay heveriny fa mety indrindra. Azonao atao ny manafina ireo sary sy horonan-tsary ireo, azo atao izany.
Satria indraindray ny sary izay anamarihana ny olona amin'ny Instagram dia tsy tiana foana. Misy aza ny tranga misy sary spam. Ka, tsy tianay haseho ao amin'ny mombamomba anay izany amin'ny fampiharana malaza amin'ny Android. Inona no azontsika atao amin'izay? Tantano izay tiana haseho anay fa izay tsy.
Ity dia zavatra azontsika atao ny mitantana amin'ny fotoana rehetra avy amin'ny toe-javatra eo amin'ny fampiharana. Azontsika atao ny manova azy isaky ny mila tsy misy olana be loatra isika. Amin'ity tranga manokana ity dia ny manafina ireo sary sy horonan-tsary ireo no tadiavinay izay nanoratana anay avy amin'ny mombamomba anay. Noho izany, tsy maintsy manatanteraka dingana maromaro isika, ao anatin'ireo toe-javatra ireo ao amin'ilay fampiharana. Tsotra be izy ireo.
Afeno amin'ny Instagram ny sary sy horonan-tsary
Noho izany, tsy maintsy manao izany isika sokafy aloha ny finday Android amin'ny alàlan'ny finday Android. Avy eo, tsy maintsy mandeha any amin'ny mombamomba antsika amin'ny fampiharana izahay ary avy eo tsindrio ireo dian-tsipika telo mitsivalana eo amin'ny ilany ankavanana amin'ny efijery. Avy amin'ireo safidy nivoaka dia tsy maintsy tsindrio ny fikirakirana izay hita eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery. Avy eo isika dia efa ao anatin'ny toeran'ny fampiharana.
Eto isika dia tsy maintsy miditra amin'ilay faritra miafina. Eto no ahafahantsika amboary ny lafiny maro amin'ny fiainana manokana ao amin'ny fampiharana. Ao anatin'izany ny sary sy horonan-tsary izay nanamarihana ny tagantsika. Ho fanampin'izany na aseho amin'ny mombamomba azy ireo na tsia. Amin'ireo fizarana ananantsika eo amin'ny efijery, ny iray mahaliana antsika amin'ity tranga ity dia Sary sy horonan-tsary isehoanao, izay ny fahatelo hita ao amin'io lisitra io. Avy eo dia miditra amin'ny efijery vaovao isika.
Ao amin'ity fizarana ity, Ny zavatra voalohany tsy maintsy hataontsika dia ny famonoana ny safidy Ampio ho azy. Ka rehefa misy manisy marika anay amin'ny sary na horonantsary ao amin'ny Instagram dia tsy ho ampiana ho azy ao amin'ny mombamomba anay izany. Izay efa mamela antsika hanana fitantanana tsara amin'io lafiny io. Satria isika izao no manapa-kevitra ny amin'izay ho ampiana sy aseho ao amin'ilay mombamomba ary izay tsy haseho. Noho izany, efa dingana voalohany lehibe manandanja izy amin'io lafiny io.
Etsy ambanin'ity safidy ity hanampiana ho azy dia hitantsika fa misy hafa. Ny manafina sary sy horonan-tsary. SYny fiasa izay mamela antsika hanafina izay tadiavintsika avy amin'ny mombamomba ny Instagram. Rehefa tsindrio io safidy io dia hitondra antsika any amin'ny efijery vaovao isika. Azontsika atao ny misafidy izay sary sy horonantsary izay tianay hanafina antsika amin'ilay mombamomba azy. Izay rehetra nofidintsika dia hanana sary masina miaraka amin'ny maso mivoaka, izay midika fa tsy haseho azy ilay profil.
Amin'izany fomba izany no hamaritan'ny mpampiasa ny mombamomba azy Instagram izay tianao aseho sy izay tsy tianao aseho. Ny fizotrany dia tsy misy fahasarotana, ankoatr'izay, raha manova ny saintsika isika indraindray, dia ho mora ny manitsy indray izay tiana haseho sy izay tsy ao amin'ilay mombamomba.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hanafenana ny sary sy horonan-tsary amin'ny piraofilinao ao amin'ny Instagram izay hametrahan'izy ireo marika anao
Samsung Galaxy A90, A20e ary A40 mivoaka ao amin'ny tranonkala ofisialin'i Samsung UK